Nepal Auto | दसैं आयो, हुन्डाई, ड्याटसन, सुजुकी, टोयोटा र टाटा गाडीमा यस्तो छ अफर
दसैं आयो, हुन्डाई, ड्याटसन, सुजुकी, टोयोटा र टाटा गाडीमा यस्तो छ अफर 24 Ashwin, 2075
दसैं प्रारम्भ भएको छ । विभिन्न गाडी निर्माता कम्पनीहरुले ग्राहकका लागि विभिन्न अफर ल्याएका छन् । नेपालमा धेरै बिक्री हुने कम्पनीको रुपमा परिचित हुन्डाई, ड्याटसन, सुजुकी, टोयोटा र टाटा आदि ब्रान्डले पनि विभिन्न अफर ल्याएका छन् । हेरौ, कस्ता छन् अफर ।
हुन्डाईको फेस्टिभ डिलाइट
हुन्डाईको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले ‘हुन्डाई फेस्टिभ डिलाइट’ योजना ल्याएको छ । भाद्र २१ देखि प्रारम्भ भएको सो योजना आगामी कात्तिक २७ गते सम्म चल्ने छ ।
यस योजना अन्तर्गत ग्राहकहरुले आकर्षक नगद छुट र १ वर्ष निःशुल्क बिमा सुविधा पाउने छन् । साथै स्क्र्याच कार्ड मार्फत थप १ लाख रुपैयाँ सम्मको नगद छुट, लक्की ड्रमार्फत एक सय जनालाई १०–१० ग्राम सुन प्राप्त हुनेछ । बम्पर उपहार अन्तर्गत लक्की ड्र मार्फत हुन्डाई आई २० एक्टिभ एक थान र हुन्डाई क्रेटा गाडी एक थान जित्न सक्नेछन् ।
सबै हुन्डाईका गाडीहरु ३ वर्ष वारेन्टी, ४ वर्ष फ्रि सर्भि्सिङका साथै निःशुल्क सवारी कर भुक्तानी सहित उपलब्ध हुने कम्पनीले बताएको छ ।
ड्याटसनको ‘फेस्टिभ हटडिल’
ड्याटसन गाडीको नेपालका लागि बिक्रेता पायोनियर मोटोकर्पले फेस्टिभ हटडिल योजना ल्याएको छ ।
यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकले ड्याट्सन गाडीको खरिदमा विशेष छुट लगायत अन्य थुप्रै सुविधाहरु प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसमा १ लाख ६ हजार सम्मको निःशुल्क एसेसरिज, २ लाखसम्मको नगद छुट समेत गरी कूल ३ लाख ६६ हजार सम्मको लाभ लिन सकिनेछ । यसमा पनि विभिन्न छुटहरु उपलब्ध छ ।
यसका साथै १ वर्षको निःशुल्क इन्स्योरेन्स, ३ वर्षसम्मको वारेन्टी, ३ वर्षसम्म निःशुल्क सर्भि्सिङ र एक वर्षका लागि सडक कर छुटको सुबिधा प्राप्त गर्नेछन् ।
ड्याटसनका गाडी खरिदमा मासिक न्यूनतम ८ हजार ४ सय १ रुपैयाँको किस्ताबन्दी योजना उपलब्ध रहेको छ । यतिथोरै मासिक किस्ताबन्दी योजना हालसम्म अन्य कुनै पनि कम्पनीका गाडीहरुमा नरहेको दाबी कम्पनीको रहेको छ ।
साथै एक्स्चेन्ज अफरमा ग्राहकले आफ्नो पुरानो गाडीलाई नयाँ डाट्सनसँग साट्न पनि पाउनेछन् । कम्पनीले हरेक गाडीमा सहज फाइनान्सको सुबिधा पनि प्रदान गरेको जनाएको छ ।
यस योजना अन्तर्गत ड्याट्सन गाडी खरिद गर्ने ग्राहकले डाट्सन रेडी गो मा अधिकतम रु. २,७८,२००, डाट्सन गो मा अधिकतम रु ३,३५,००० र डाट्सन गो प्लसमा अधिकतम रु ३,६६,८०० सम्मको लाभ प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
सुजुकीको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता सिजी मोटोकर्पले दसैं र तिहारलाई लक्षित गर्दै ‘पर्वोत्सव’ योजना ल्याएको छ । यसपालिको ‘पर्वोत्सव’ अफरअन्तर्गत उपभोक्ताले २ लाख रुपैयाँसम्म नगद छुट, १ लाख रुपैयाँसम्म एक्सचेन्ज बोनस तथा स्क्र्याच कुपनमार्फत १ लाख रुपौयाँसम्म अतिरिक्त छुट पाउनेछन् ।
यसबाहेक उपभोक्ताले कम्पनीका २०१७ का सम्पूर्ण मोडलमा तथा नाडा अटो शोको बुकिङमा विशेष छुटसमेत पाउने कम्पनीले जनाएको छ ।
टोयोटाको फेस्टिभल अफर
टोयोटाको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेटले फेस्टिभल अफरको रुपमा विभिन्न सुविधा दिने भएको छ । सवारीसाधन किन्ने ग्राहकलाई एक वर्षको बिमा शुल्क र सडक दस्तुर कम्पनी आफैले उपलब्ध गराउने भएको छ । ग्राहकलाई कम्पनीले अन द स्पट एक्सचेन्ज उपलब्ध गराउने छ ।
हरेक खरिदमा सरप्राइज उपहार राखेको जनाएको कम्पनीले आर्कषक नगद छुट दिने जनाएको छ । कम्पनीले केही दिन पहिले भित्र्याएको टोयोटा रसका साथै ल्यान्डक्रुजर प्राडो, फच्र्युनर, ¥याभ फोर, हाइलक्स र नयाँ इटियोसमा समेत यो अफर उपलब्ध हुनेछ ।
टोयोटाको सोरुम दसैं सम्म शनिबार समेत खुला हुने बताइएको छ ।
टाटाको मेगा अफर
टाटा मोर्टसले बडादसैं मेगा अफर ल्याएको छ । यस अन्तर्गत टाटाले हरेक कारमा एउटा आइफोन एक्स सितैमा देखि २ लाख रुपैया“सम्मको भारी छुट दिने भएको छ ।
अफर अन्तर्गत टाटाले १ वर्षको निःशुल्क इन्स्योरेन्स, १ वर्षको सडक दस्तुर छुटर २५ हजार रुपैया“ सम्मको एसेसरिज उपलब्ध गराउने भएको छ ।
कम्पनीले १६ हजार ८ सय रुपैया“को किस्तामा पनि टाटाका गाडी उपलब्ध गराउने जनाइएको छ । यस्तै केही गरी गाडी बिग्रेमा २५ हजार रुपैया“सम्मको मर्मत टाटा मोटर्स आफैले गरिदिने भएको छ ।
काठमाडौं-हेटौडा सुरुङमार्गः के हुँदैछ ?
काठमाडौं – सरकारले दिएको अनुमतिको म्याद सकिन १८ दिनमात्रै बाँकी रहँदासम्म...
टायरको रङ किन कालो हुन्छ ? यस्तो छ रहस्य